दलीय कार्यकर्ता : राष्ट्रिय लज्जा- विचार - कान्तिपुर समाचार
सभ्यताको विकासक्रममा — र आधुनिक राष्ट्र राज्य बनेपछिको केही शताब्दीको अनुभवमा — सधैं प्रमाणित विषय के हो भने, मान्छेको जात बिग्रेपछि आफै सुध्रिँदैन । किनकि उसलाई आफू बिग्रे जस्तै लाग्दैन । आफू बिग्रेको छु भनेर आत्ममूल्याङ्कन गर्न नसक्नु मान्छेको नैसर्गिक चरित्रमै पर्छ । त्यसैले नेतृत्व बिग्रियो भने त्यसलाई कार्यकर्ताले फेर्ने हो । जब कार्यकर्ता र नेताको नैतिक पतनको रफ्तार एउटै हुन्छ, तब उक्त देशको हालत अहिलेको नेपालको जस्तो हुन्छ । व्यक्तिगत कुराकानीमा प्रायः कार्यकर्ताले वर्षौंदेखि भन्दै आएका छन्, ‘के गर्ने, हाम्रा नेताहरू बिग्रे ! हाम्रो कोसिस तिनलाई सुधार्नेतर्फ छ ।’ तर सायद यथार्थ अर्कै छ । कार्यकर्ता पनि नेताजत्तिकै बिग्रिसकेका छन् । तसर्थ अब समाजमा कसैले आफूलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भन्छ भने उसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ— तिमी केका लागि राजनीतिमा छौ? प्रकाशित : पुस २१, २०७६ ०९:४२